Waa maxay astaamaha Gmail? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 513
Waqti badan Gmail waxay sameysay tabo cusub oo badan sababahaasna waan ku tusi doonaa,
Wadahadal Muuqaal: Gmail wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto dhamaan e-mayllada soo galaya iyo kuwa baxaya, oo aad ku xaqiijin karto adiga oo dib uga hubsanaya emaylladaadii hore macluumaad. Haddii ay dhacdo in aadan daawan karin aragtidan waa inaad gashaa:
Waxaad awood u leedahay ama aad gabaysaa ikhtiyaarka.
Ka noqo dir: Waxaad soo dirtay emayl aadan u baahnayn inaad sii wado, si aad uga laabato dirista waa inaad dhaqso wax uga qabataa, waxaadna aadeysaa shaashadda bidix waxaadna gujineysaa ka noqoshada.
Calaamadaha muhiimka ah: Gmail wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato emaylka aad rabto inaad calaamadeyso ee muhiimka ah iyo kuwa aan ahayn. Si aad howshan u qabato waa inaad dhaqaajisaa oo aad gasho:
Calaamadaha muhiimka ah.
Tags: Waxay fududeeyaan maareynta waraaqo fara badan. Waxaad ku sameyn kartaa sida soo socota:
Tag goobaha guud.
Tag xulashada Tags.
Xulo xulashada aad rabto.
Categories: Emailada si toos ah ayaa loo abaabulaa waxaana lagu dari karaa ogeysiisyo, goleyaal, bulsheed ama dallacsiin. Habka loo maro waa inaad gashaa "Tag" xagga hoose.
FadlanIkhtiyaarigani wuxuu ka dhigayaa emayl qarsoodi ah illaa waqtiga la doonayo, taas oo ah, waxay ku baaba'aysaa sanduuqa oo dib ayaan uga soo muuqan karnaa waqtiga la doonayo.
Jadwalka rarka: haddii aad u baahan tahay inaad dirto waraaqda timaadda markaad u baahato, waad barnaamij ka samayn kartaa adigoo si fudud u riixaya fallaarta ku xigta badhanka dirista.
Qarsoodinimada: Gmail wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarkan ka dhigaya emaylkaaga mid gaar ah, iyadoo:
Hubi ikhtiyaarka taariikhda uu dhacayo.
Koodhka helitaanka wicitaanka.
Hubi ikhtiyaarka aan loo gudbin karin, la koobiyeyn karin ama wax kale.
Saxanado Waxyaabo Badan Lagu Kordhiyo: Gmail shaqadan waxaad ku dari kartaa ilaa shan shey oo sanduuqa laguugu hagaajiyo midka ugu weyn. Waxaad ku samayn kartaa sidan:
Tag goobaha horumarsan
Daaqada 'Inbox Multiple' waa la daawan doonaa.
Waad habeynaysaa kuwa aad ku dari doonto.
Jawaabaha horay loo sii qeexay: Waad abuuri kartaa emayl dhaadheer waxaadna calaamadin kartaa jawaab haddii had iyo jeer lagaa rabo inaad qorto jawaab isku mid ah. Waxaad ku sameyn kartaa sidan:
Tag goobaha horumarsan.
Guji Jawaabaha Hore.
Emailada aan la aqrin: Gali qoraalka qoraalka: laguma aqrin daaqada raadinta.
Ku dhaji sawiradaXulashadan waxaad ku jiidi kartaa sawirro iyo faylal kale emaylka Gmail adoo adeegsanaya Chrome.
Isku-darka Khariidadaha Google: tan waxaad ku dari kartaa khariidad jirka fariinta ku jirta.
Google turjubaan: Fursad fiican oo ay Gmail ku siiso inaad tarjunto farriimaha emaylka.
Adeegso Google Docs: Kuu ogolaanayaa inaad la abuuro waraaqaha la email kasta. Dukumiintiyada ku lifaaqan sidoo kale waxaa loo rogi karaa dukumiinti waafaqsan.
Adeegso Calendar Google: Waxaad soo diri kartaa farriimo "SMS" ah oo shaqadoodu tahay digniin xusuusin ah.
Boostada mudnaanta leh: Waxaad awoodi doontaa inaad dalbato sanduuqaaga iyo taariikhda emaylkaaga, kala-saar oo aad ku dhex wareejiso baakadaha kala duwan, iyadoo loo eegayo baahida aad u qabto. Waxaad sidoo kale wax ka beddeli kartaa adoo adeegsanaya emaylka 'Gmail'.